Ovaina ny fiaraha-monina mba ho tsapan’ny olona ny fivoarana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny loabary an-dasy, fanokafana amin’ny fomba ofisialy satria izy ity dia hipariaka manerana ny nosy. Heverina fa misy lohahevitra tsara raha mba ny Malagasy rehetra no misaintsaina sy miresadresaka azy. Nampahafantarana ireo lohahevitra hifampiresahana. Voalohany dia fieritreretana izay fiaraha-monina heverintsika fa tsara aorina eto amintsika. Izay no lohahevitra lehibe aroso hodinihina, tsy tongatonga ho azy tamin’izao fa efa nisy fikarohana siantifika natao. Nisy dinidinika manerana ny Nosy, ny faritra rehetra manerana ny Nosy dia efa noresahana an’io avokoa. Sitraky ny olona ity vinam-piaraha-monina ity. Hitanay izany rehefa nandehandeha tany rehetra tany izahay. Rehefa taNteraka izany vinam-piaraha-monina izany dia ho fiaraha-monina misy firaisan’aina (symbiotique), sy mampisy firaisan’aina (symbiotisant) i Madagasikara tsy mifampitsetsitra, tsy mifanambaka fa mifanome tanana sy mifanampy nefa mampivelatra, atao izay hivelaran’ny tsirairay. « Izay no fiaraha-monina tian’ny olona hajoro » hoy Atoa Andriamparany Ricky filohan’ny AFK. Rehefa mety io dia tsy tokony hitady vinam-piaraha-monina hafa intsony ny mpitondra fanjakana fa io no hampiharina izay sitraky ny olona iainana manerana ny Nosy. Hazavana be ny eto amin’ny Firenena rehefa tanteraka io vinam-piaraha-monina io. Tsy hisy intsony ny zanak’ikalahafa, satria mifanohana sy mifamelona ny tsirairay, tsy misy mifanindrinindry, na mifamaky. Rehefa mifantoka any ny ezaka atao dia tafavoaka ao anaty lavaka ny Firenena. Ary ho lasa Firenena sangany eto an-tany i Madagasikara aoriana ao. Fanokafana fotsiny ny loabary an-dasy ny natao tamin’ny 27 febroary, fa isika efa nantsoina foana mba handray andraikitra na fiangonana izany, na fanjakana, na fikambanana ka ity vinam-piaraha-monina ity izany no atolotry ny Antso Fiaraha-monina Kristianina na AFK ahafahan’ny rehetra mandray andraikitra ary fandraisana andraikitra voalohany, fa hevero aloha ny zava-dehibe. Inona ny vinam-piaraha-monina tiantsika iainana eto, ka aroso ho an’ny Firenena ?
Ny mpitondra fanjakana izany dia tokony hifantoka any ny ezaka ataony, ny mpanohitra ihany koa, ny rehetra ihany koa dia mifantoka any. Efa an-jato taona no nitoriana ny vaovao mahafaly teto amintsika, 60 taona no nahazoana fahaleovan-tena. Tsy nivoatra ny fiaraha-monina, manjaka ny samy maka ho azy, ny ory hava-manana, kolikoly, mivoaka avokoa ity karazan-toetra ratsy tsy mampandroso ity. Izao no misy antsika ankehitriny, isan’ireo Firenena mahantra indrindra eto an-tany.
Eto izany na fiangonana, na fikambanana, na Fanjakana dia izao, ovay ny fiaraha-monina mba ho tsapan’ny olona ny fivoarana. Ho an’ny fiangonana dia tsy tokony hijanona fotsiny any am-piangonana ny toroteny na ny maha kristianina, na koa hijanona amin’ny asa sosialy fotsiny. Tsy mampandroso sy tsy mampivoatra ny asa sosialy satria zatra ampiana lava ny olona. Asa mahatonga ny olona ho tompon’andraikitra no ilaina.
Olana ngezabe eto amin’ny Firenentsika ny tsy fifampatokisana amin’izao fotoana izao. Manimba zavatra maro, mifampiahiahy lava, misalasala, miteraka tahotra hany ka tsy afaka manao zavatra fa midonaka fotsiny eo. Rehefa tsy mahavita dia mialona izay mahavita fotsiny no atao. Io ilay ory hava-manana. Tsy manao fa miandry izay tsy mety ataon’ny hafa mba ho kianina.
Araka ny fikarohana efa natao dia misy andry fototra sivy tsy maintsy ajoro mba ialana amin’izany. Hamerenana indray ny fifampitokisana eo amin’ny samy Malagasy. Tsy mifampitsetsitra, tsy mifanambaka fa mifanohana, mifamelona, mifanome-tanana, ary mifampivelatra. Afaka ho azy ny tsy fifampitokisana rehefa mahatsapa ny rehetra fa iray vatsy sy iray aina. Izay no atao hoe miverina amin’ny hasiny ny maha olombelona, izay harena voalohany.
Afaka atao tsara mihitsy ny hoe, ny Malagasy no tompon’ny harena eto amin’ity Firenena ity. Ny mahatonga an’izany ho tanteraka dia ovaina ny « système de comptabilité national », heverina tahaka ny orinasa lehibe i Madagasikara, ny teratany Malagasy rehetra no tompon’ny renivola ao. Tsy aleo ve izany no mba dinidinihina ? Ankehitriny angaha isika tompon’ny harentsika ? Ny mpanambola avy any ivelany no tompon’ny harentsika ? Mila resahana izany.
Ilaina ny hahatompon’andraikitra ny Malagasy rehetra, mandroso ny Firenena, ny Malagasy rehetra no tompon’andraikitra, milentika ny Firenena ny Malagasy rehetra no tompon’andraikitra. Tokony hahatsapa ny tsirairay fa manana andraikitra sy adidy eo amin’ny Fireneny.
Hitantsika tamin’ireny Barea ireny. Rehefa misy zavatra mba reharehan’ny Firenena dia mijoro ny olona.